Manahy aho sao… | mandimby maharo
Manahy aho sao…	Posted on 16 July 201221 January 2013 by Mandimby Maharo	Ny fifidianana irery ihany no vahaolana amin’izao krizy eto Madagasikara izao. Samy efa nilaza io avokoa ireo mpanao politika Malagasy, ireo mpanelanelana sy ireo vondrona iraisam-pirenena mpisehatra amin’izao famahana krizy izao. Tsy iadiana hevitra io satria raha mbola te hampihatra ny demokrasia isika eto Madagasikara dia ny fifidianana ihany no endrika maneho izany. Ny mbola olana mampihitsoka nefa dia ny fomba anatanterahana io fifidianana io.
Eo aloha ny hoe fifidianana inona no alefa mialoha. Raha ny hevitry ny avy ao amin’ny Fat sy ny Tgv dia ny fifidianana ireo parlemantera no azo atao aloha satria manakaiky kokoa ny olona ka mora ny manaramaso azy. Azo tanterahina amin’ity taona ity io raha ny hevitr’I Andry Rajoelina. Ho an’ireo avy ao amin’ny ankolafy Ravalomanana kosa dia ny fifidianana filoham-pirenena no tsara atao mialoha. Tsy ho tanteraka amin’ity taona ity koa io fifidianana io satria maro ireo fepetra tsy mbola mipetraka. Ny Cenit sy ny avy ao amin’ny Onu dia tetiandro ny azy no mazava:, novambra hoy ny voalohany, amin’ny taona 2013 vao misy fifidianana azo ataohoy ity farany.
Raha ireo fotsiny no henoina dia efa mampanahy sahady ny tsy hisian’ny fifidianana eto. Na dia efa eo aza ireo endrika ivelany maro maneho fa hizotra ho any isika dia tsapa koa fa tsy mbola ao ilay fahavononan’ireo mpanao politikantsika tena hiroso. Toa tsy mifanaraka amin’ilay hevitra avoaka manko ny fihetsika atao. Hita ihany ireny fanentanana amin’ny fankahalana sy fanentanana amin’ny fifandrafesana ireny.
Manahy koa aho fa na hisy fifidanana ary eto dia hanao ahoana aorian’io raha izao lonilony izao no toe-po anaovana izany fifidianana izany. Sao dia ilay fifidianana natao amaha olana politika indray no hiteraka saritaka sosialy eto? Mino ve isika fa raha misy olom-boafidy iray eo dia hankato io avokoa ny rehetra? Mino ve isika fa efa tena mifantoka any amin’ny fifidianana ny vahoaka? Mety ve ny manao fifidianana amin’izao tany tsy milamina fa feno basy miparitaka izao? Ka raha ho lany eo ve izay filoham-pirenena na izay solombavam-bahoaka dia tsy ho ampiasain’izay resy ireny fitaovam-piadiana ireny hanoherany izany valim-pifidianana izany?
Tsara ny finiavana hanao fifidianana saingy ilana fitoniana izany vao azo tanterahina. Fitoniana eo amin’ireo samy mpanao politika mihevitra ny hirotsaka ho fidiana aloha. Mila mahay mifandamina ireo ka mametraka tsara ny fototra iorenan’ny fifidianana ho atao. Mila fifandamilnan’ireo mpifidy koa ka hametraka dina fa ho ankatoavina izay lany ara-demokratika eo. Ary tsy azo iodivirana fa mila antoka avy amin’ireo namana avy any ivelany fa hahazo ny fankatoavany izay lany eo. Satria tsy ny maha ara-dalana ihany no tena ilaina amin’ny fifidianana fa ny ara-drariny koa.Tsy izay ve ilay fifidianana malalaka sy tsy mitanila?
Tags: fifidiananaCategories: societé, Uncategorized
One thought on “Manahy aho sao…”	Pingback: Armée malgache : RIDICULE. « mandimbymaharo Leave a Reply Cancel reply	Enter your comment here...